लिङ्क बिल्डिंग र लिङ्क गुणस्तर द्वारा Semalt विशेषज्ञ इवान Konovalov
सम्पादकहरू नोट: इवान कन्टोलोलोभ अर्ल्ल्टमा ग्राहक सफलता प्रबन्धक हो। कम्पनीसँग 10 000 सफल ग्राहकहरू छन् र सँधै उत्तम एसईओ टेक्नोलोजीहरूसँग अगाडि बढ्दैछन्।
सर्च इन्जिनहरूले रैंकिङ वेबसाइटहरूको राम्रो काम गर्छ जुन उच्चको लागि आगन्तुकको खोजी क्वेरीको लागि अधिक मानिन्छ।
खोज इन्जिनले तपाईको साइटमा 60 प्रतिशत नि: शुल्क ट्राफिक लाई जित्न सक्दछ, तपाईंको साइटमा लिङ्कहरू निर्माण गर्न कुनै पनि कारण छैन र नि: शुल्कको यो ठूलो टुक्राको आनन्द लिने कुनै कारण छैन। यातायात।
लिंक इमारतको विषय आफैमा विशाल छ, र तपाइँ यसलाई समय संग सिक्नु हुन्छ र तपाईंले प्रयोग जारी राख्नुहुनेछ।
तथापि, त्यहाँ केही जानकारी आवश्यक छ जुन तपाइँ सुरू गर्न सिक्न र अधिक साधारण क्षतिहरूबाट बच्न सिक्न आवश्यक छ।
किन लिंक बिल्डिंग महत्वपूर्ण छ
यदि तपाइँ फ्रिज जस्तो केहि चीज गर्न चाहानुहुन्छ, तपाई यस्तो परिदृश्यमा के गर्नुहुन्छ?
तपाईंले सम्भवतः एउटा पसल पत्ता लगाउनुभयो जहाँ तपाईं उत्पादन किन्न सक्नुहुनेछ, चाहे अफलाइन वा अनलाइन व्यापारीहरू मार्फत।
तपाईं एक स्टोर गर्न जाँदैछ र फ्रिज फ्रिज गर्नुहोला बिना कुनै पनि उनीहरूको सिफारिसको लागि सोध्नु हुन्छ जब तपाईं जान्दछन् कि कसरी एक सूचित निर्णय गर्न को लागी।
तपाईं आफ्नो अनुभव, प्राथमिकताहरू, वा सम्भावित मित्र वा परिवारको सदस्यबाट सिफारिशको आधारमा विकल्प रोज्नुहुनेछ। यद्यपि, यदि तपाईं आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक फ्रिज खरिद गर्नुहुने छ भने, तपाईं एक सूचित निर्णय गर्न चाहानुहुन्छ, तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ? प्रायजसो, तपाइँ फ्रिज खरिद गर्न जान्नुहुने व्यक्तिबाट केही सिफारिस खोज्नुहुनेछ। तपाईं त्यो व्यक्तिको निर्णयमाथि विश्वास गर्नुहुनेछ र तपाईंको खरिदमा जानुहोस्, दाँया?
विश्व वाइड वेब एउटा ठूलो स्थान हो। जब खोज इन्जिनहरूले आगन्तुकको प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ, तिनीहरू वेबमा नमिल्दो परिणामहरूको लागी हेर्छन्। चूंकि त्यहाँ धेरै वेबसाइटहरू छन् जुन उही सूचना प्रस्ताव गर्न सक्छन्, यो खोज ईन्जिनियरिङ्का लागि खोजी परिणामको क्रममा उत्तम साइटमा स्थान निर्धारण गर्न कठिन छ। यस्तो परिदृश्यमा लिङ्क मद्दत।
चलो भन्नुहोस् कि तपाईं सँग एक यात्रा वेबसाइट छ जहाँ तपाइँ आफ्नो देशका विभिन्न होटेलहरूमा बुकिङ र आवास बुकिङमा सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ। अब, यदि तपाइँका केहि एयरलाइन्स वा होटल्सबाट तपाईको साइटमा आउने लिङ्कहरू छन् भने, तपाइँको वेबसाइटमा धेरै फाइदा उठाउनेछ र तपाईंलाई अन्य साइटहरूको तुलनामा SERP हरू (खोजी इञ्जिन परिणाम पन्ने) मा उच्च रैंकिङ प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। तिम्रो। लिङ्कहरू विश्वासको बराबर छन्। Source - free zeus slots machine.
जब दुई साइट सामग्रीमा समान छन्, जो उच्च रैंकिंग हुन्छ साइट जुन खोजी ईन्जिनियरिङ् सँग सबैभन्दा भरपर्दो बनाइयो।
जब तपाइँ अन्य वेबसाइटहरूमा लिङ्कहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ, तपाइँ साझेदारी अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंको विषयमा एकअर्कामा विश्वास राख्नुहोस्। खोज ईन्जिनियरिङ्लाई लिंक गर्न मन लाग्छ।
इनबाउन्ड एन्ड आउटबाउन्ड लिंक
इनबाउन्ड लिङ्कहरू ती लिङ्कहरू हुन् जुन अन्य वेबसाइटहरूबाट आउँदै छन्, आउटबाउन्ड लिङ्कहरू जसले तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइटबाट केही अन्य इन्टरनेट साइटमा आगन्तुक पठाउँछ।
इनबाउंड लिङ्कहरू अन्य वेबसाइटले तपाईंलाई कसरी भरोसा गर्छ र आउटबाउन्ड लिङ्कहरू देखाउँछन् कि तपाइँ अन्य साइटमा कति भरोसा राख्नुहुन्छ ।
गुण मानवलाई सधैं महत्त्वपूर्ण छ, र यो पनि केहि चीज हो जसमा खोजी इञ्जिनहरू स्थान मान।
तिनीहरूको उद्देश्य प्रयोगकर्ताको प्रश्नको लागि सबैभन्दा सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण नतिजा प्रस्तुत छ जब कुखुरालाई काटेर वा गुच्छाको बीचमा राख्ने।
यसको अर्थ छ कि उनीहरूले निश्चित रूपमा तपाइँलाई सही समयबाट सही परिणामहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ।
लिंक को गुणवत्ता के छ?
यो एउटा महत्त्वपूर्ण कारक हो जसले खोज इन्जिनलाई वेबसाइटको गुणस्तर र भरोसाको निर्धारण गर्दछ।
जब तपाइँ आफ्नो साइटमा लिङ्कहरू निर्माण गर्नुहुन्छ, तिनीहरू महत्वपूर्ण छन् कि उनीहरू विश्वसनीय र उच्च गुणस्तर साइटहरूबाट आउँछन्।
तपाईंको वेबसाइट को लागि दिए गए विषय मा अनंत वेबसाइटहरु को रूप मा लिंक र रिटर्न मा लिङ्क प्राप्त गर्न को रूप मा, र अन्त मा खोज परिणाम पृष्ठों मा उच्च रैंकिंग प्राप्त को रूप मा, यो लिंक एक दिए गए शीर्ष शीर्ष स्थलों देखि वर्ग।
उच्च गुणस्तरको साइटहरूबाट सेल्टल्ट लिङ्क एउटा संकेत हो जुन यस्तो वेबसाइटहरूले तपाईँलाई र यी आन्तरिक लिङ्कहरूमाथि भरोसा राख्ने खोज इन्जिनहरू बताउँछन् जुन तपाइँको वेबसाइटमा उपभोक्ताको लागि केहि उपयोगी हुन सक्छ।
यो एक प्रकारको सिफारिस हो जुन फ्रिज खरिद गर्दा तपाईले खोज्नुहुन्छ, माथि उल्लेखित रूपमा।
तपाईले व्यक्तिगत विषयमा मात्र यो विशेष विषयमा अख्तियार व्यक्तिलाई सिफारिसहरू मान्नुहुन्छ।
थप उच्च गुणस्तर आउने लिङ्कहरू जुन तपाइँ आफ्नो साइटमा प्राप्त गर्न व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको उत्तम रेटिङ हुनेछ!